GOTHENBURG RAMADAN CUP: Tartankii Ramadaanka Gothenburg oo lagu kala baxay iyo Somskan oo ku guuleysatey + Sawirro – Gool FM
(Gothenburg) 05 Luulyo 2016 – Tartankii lagu maamuusay bisha barakaysan ee Ramadaan oo in muda ah ka socday garoomada Kviberg iyo Bergsjönvallen isla markaana ay wax kasoo abaabushey Gool FM ayaa shalay galab lagu soo afmeeray ciyaar kama dambeys ah ama Final ah.
Waxaana munaasibadan kasoo qayb galay bahweynta isboortiga ee ku dhaqan magaalada iyo martisharaf kale oo gobollada ka socotey oo lagu casuumey tartanka Ramadaanka Gothenburg ayaa waxaa kulan aad iyo aad u soo jiitay indhaha daawadayaasha uu dhexmaray kooxaha ka kala ah Somskan FC vs Daraawiish FC.
Kulankani u dhaxeeyay labadan kooxood oo ahaa mid xiiso badan oo ay kooxiba dooneysay ineey hanato koobka Ramadan Cup Gothenburg 2016 ayay halkaasi ku soo bandhigeen ciyaar cajiiba iyada oo labada kooxoodba ay ahaayeen kuwa akhlaaqi ka muuqato.
Waxaana ciyaarta laba gool oo isdaba jooga ku hormartay kooxda Somskan qaybtii horena waxaa lagu kala nastay 2-0 oo ay hogaanka ku haysay Somskan, qaybtii dambe ciyaarta markii la isku soo labtay waxaa gool deg deg ah heshay kooxda Daraawiish oo latimid cayaar sarreeysa walow ay iska khasaariyeen kubado badan gool loo filan karey.
Ugu dambeyntii waxaa ay guushu raacday kooxda somskan oo ku badisday 4-2, sidaana ku hanatay koobkii Ramadan Cup Gothenburg 2016 oo ay sanadkan wax kasoo agaasintey Gool FM.
Waxaa jirta xaflad balaaran oo lagu guddoonsiin doono kooxaha abaalmarino kal duwan taasoo ay ka qayb qaadan doonto Gool FM, waxayna ka dhici doontaa lokaalka Bergsjödalen 57.
Cinwaanka: BEGSJÖDALEN 57, 415 23 GÖTEBORG.
Saacadduna waa 18.00 MAALINTA Khamiista 2016/06/07.
DHEGEYSO: Tababare Soomaaliyeed oo macallin u ah dal aadan fileeynin oo ay is wajeheen xul uu wato Patrick Kluivert + Sawirro (Waraysi)